roller ဝက်ဝံထုတ်လုပ်သူ, roller ဝက်ဝံပေးသွင်း - ထိပ်တန်း - ဝက်ဝံ
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကတိကဝတ်ပါပြီ အပ် roller bearings နှင့် cylindrical roller bearings ဂီယာလယ်ပြင်၌တည်၏. အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ, စက်မှုအပ်ချုပ်စက်တွေ, ဥယျာဉ်စက်ယန္တရား, လျှပ်စစ်ကိရိယာများ, စက်မှုစက်ရုပ် RV လျှော့ချစက်များနှင့်အပြင်ဘက်အင်ဂျင်စသည်တို့.
Changzhou Top-Bearing ကုမ္ပဏီ, Ltd ကိုဇူလိုင်လတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 2007, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်25ရိယာအကျယ်အ ၀ န်း ၂၅၀၀၀ အကျယ်ရှိသည်2, 23000m တစ်စက်ရုံareaရိယာနှင့်အတူ2 နှင့် 136 ဝန်ထမ်းများ, အပါအဝင် 12 ပညာရှင်. ကျွန်ုပ်တို့သည် Koyo မှစတင်လုပ်ကိုင်သည် 2014 နှင့်ဂျပန်နည်းပညာများနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် bearings ထုတ်လုပ်နိုင်သည်, သောထိုင်ဝမ်ဝက်ဝံကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
ထုတ်လုပ်သူ CNTP roller & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း အမျိုးမျိုးသောအပ် roller များနှင့်အပ် bearings များထုတ်လုပ်သည်, ထိုကဲ့သို့သော K ကိုစီးရီး - radial အပ် roller နှင့်လှောင်အိမ်အသင်းတော်များအဖြစ်, HK စီးရီး - ဆွဲ - ခွက်ကိုအပ် roller ဝက်ဝံ, HF စီးရီး- ဆေးကြောထားသောအပ်စက် roller clutches, NK စီးရီး - လေးလံသောတာ ၀ န်အပ်သော roller bearings နှင့် AXK စီးရီး - တွန်းထိုးအပ် roller နှင့်လှောင်အိမ်အသင်းတော်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို USA သို့တင်ပို့ပြီးပါပြီ, ဗြိတိန်, ဂျာမနီ, အိန္ဒိယ, ကိုရီးယား, ထိုင်ဝမ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ. In 2019, အရောင်းပမာဏက 7.5 အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း, အရာ၏အကြောင်း 1.5 အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းကိုဂျာမနီသို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့သည်, ဗြိတိန်, ယူအက်စ်အေ, စသည်တို့.